लेखिका भानुमती नरसिम्हनको ‘सीता–अ टेल अफ एन्सिएन्ट लभ स्टोरी’ पुस्तक विमोचन – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ लेखिका भानुमती नरसिम्हनको ‘सीता–अ टेल अफ एन्सिएन्ट लभ स्टोरी’ पुस्तक विमोचन
लेखिका भानुमती नरसिम्हनको ‘सीता–अ टेल अफ एन्सिएन्ट लभ स्टोरी’ पुस्तक विमोचन
आर्थिक दैनिक २०७८, मंसीर २० ११:२९
काठमाडौँ । लेखिका श्रीमती भानुमती नरसिम्हनको ‘सिताः अ टेल अफ एन्सिएन्ट लभ’ पुस्तक विमोचन भएको छ । आर्ट अफ लिभिङद्वारा शुक्रबार आयोजित एक सांगीतिक साँझमा उक्त पुस्तक विमोचन गरिएको हो ।
लेखिकाको साथै उनी मेडिटेसन टिचर, इन्टरनेसनल वुमन्स कन्फरेन्सको डाइरेक्टर र आर्ट अफ लिभिङको वुमन वेल्फेयर र बाल संस्कार विभाग प्रमुख पनि रहेकी छिन् । कार्यक्रममा नेपालको प्रथम महिला एवं महिला अधिकारकर्मी डा. आरजु राणा देउवाको प्रमुख आतिथ्यता र सरकारी सेवाका उच्च पदाधिकारीहरुसहित दुई सय ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले लेखिकासँग सीताको जीवनीबाट सिक्न सकिने नेतृत्व क्षमतासम्बन्धी गहन छलफल गरेका थिए । लंकाको राजा रावणबाट अपहरित भएपछि अशोकवाटिकामा टहल्दै गर्दा सीताको आफ्नै विगतका सम्झनाहरुको संगालोले पाठकलाई अन्तिमसम्म नै तानेर राख्छ ।
विभिन्न प्रकाशित पुस्तक तथा उपन्यासहरु, धार्मिक ग्रन्थहरुका कहानीहरु/किस्साहरु एवम् पुस्तौँदेखि सुन्दै÷सुनाउँदै आएको कहानीहरुलाई समेटेर पुस्तकमा लेखिकाले सरल रुपमा आफ्नो बुझाइहरु प्रस्तुत गरेकी छिन् । यो पुस्तकमा प्रतिभा कुमारीको १६ वटा आकर्षक इलस्ट्रेटिव चित्रहरु पनि समावेश गरिएको छ ।
मिथिला क्षेत्रकी प्रिय राजकुमारी सीता भारतीय इतिहासमा अत्यन्त सम्मानित नारी हुन् । उनको लोकप्रियताको बाबजुद पनि उनलाई कमैले मात्र बुझेका थिए । उनले सत्यलाई आत्मसात् गर्दै जीवनको हरेक संघर्षलाई आदर्शको साथ स्वीकारिन् । उनले जीवनमा धेरै त्याग गर्नुप¥यो तर उनी जहाँँ पुगिन् त्यहाँ कहिल्यै केही कुराको कमी भएन । यस्तो लाग्थ्यो उनको जन्म रामकै निम्ति भएको थियो । हरेक परिस्थितिमा रामप्रति सीताको समर्पण र सीताप्रति रामको प्रेम छचल्किन्थ्यो ।
पुस्तकको बारेमा बोल्दै डा. आरजु राणा देउवाले भनिन, ‘महिला अधिकारकर्मीको हैसियतले मैले जहिले पनि सीताको सहनशील र शान्त व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने गर्दथेँ तर जब म बुझ्ने भएँ मैले महसुस गरेँ कि उनको शान्त र सहनशील स्वभावमा पनि बहादुरी थियो । आफूमाथि आइपरेको हरेक चुनौतीहरुलाई उनले साहस र बुद्धिमताको साथ सामना गरिन् । रावणजस्तो शक्तिशाली, धनी, पराक्रमी र बुद्धिमानले पनि उनको दृढता, सहनशीलता र साहसलाई जित्न सकेन । कलिलो उमेरमै उनले प्रदर्शन गरेको परिपक्वता र बुद्धिमत्ता सदैव उदाहरणीय छ ।’
यस पुस्तक पढ्ने जो–कोहीले मानव अवतारमा भगवान्को दर्शन पाउँछ । पुस्तकले जनकपुरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कथाशैलीको बारेमा लेखिकाले भनिन्, ‘सीताको जीवनप्रतिको बुझइ जहिले पनि स्वार्थरहित, करुणामय र सत्यवादी थियो । उनको नजरबाट उनकै कथाहरु प्रस्तुत गर्न पाउनु गौरवको कुरा थियो । ज्ञानले मानिसलाई आफ्नो भित्री आत्मासँग जोड्छ । पानीको थोपा जब समुद्रसँग मिल्छ, यो पनि समुद्र नै हुन्छ ।
सीताले रामसँग मात्र होइन, आफ्नो माता सुनयना र पिता जनकसँग, आफ्नो बहिनी उर्मिलासँग र प्रकृतिसँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेकी थिइन्  । उर्मिला पनि कथापछाडिको उत्तिकै बलियो पात्र हुन् र उनको बहादुरी र सहनशीलता पनि प्रसंशनीय छ ।